English Speaking _ Business Expression (8) ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 10:35 PM | No မှတ်ချက် | ‎Win Naing Oo‎ to အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများ
………………………………….. 71. When will the meeting be held? ဘယ်အချိန်မှာ အစည်းအဝေး ကျင်းပမှာလဲ 회의가 언제 개최됩니까? . 72. The meeting is scheduled for tomorrow. မနက်ဖန်မှာ အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲထားပါတယ် 회의는 내일로 여정되어 있습니다.
. 73. We haveameeting every Friday. ကျနော်တို့က သောကြာနေ့တိုင်း အစည်းအဝေး ရှိပါတယ် 우리는 매주 금요일에 회의가 있습니다. . 74. Who run the meeting? ဘယ်သူက အစည်းအဝေးကို အကောင်အထည်ဖေါ်မှာလဲ 누가 회의를 진행 합니까? . 75. Who supervises the meeting? ဘယ်သူက အစည်းအဝေးကို ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲ ပေးမှာလဲ 누가 회의를 주재 합니까? . 76. What’s the agenda for the meeting? အစည်းအဝေး အစီအစဉ်က ဘာပါလဲ 회의 의제는 뭡니까? . 77. May I have your attention, please? ကျေးဇူးပြုပြီး အာရုံစိုက်ပေးကြပါ 주목 해주십시요. . 78. Is everybody here? လူစုံပါပြီလား ( လူတိုင်းဒီကို ရောက်ပါပြီလား) 모두 오셨습니까? . 79. Let’s get down to business.A စီးပွားရေးကိစ္စဆီကို သွားလိုက်ကြစို့ ( ဆွေးနွေးကြပါစို့) 본론으로 들어 가겠습니다. . 80. Let’s go on to the next subject. နောက် အကြောင်းအရာဆီကို သွားလိုက်ကြပါစို့ (အကြောင်းအရာသစ်ကို ဆက်ဆွေးနွေးကြပါစို့) 다음 주제로 넘어 가겠습니다. ………………………………………………. ဝေါဟာရ ရှင်းလင်းချက် .............................
Schedule (V) (စကက်ဂျူး (US) ၊ ရှက်ဂျူး (UK)) : အစီအစဉ်ဆွဲသည် (ပိုက်ဆံစုမယ် ၊ တိုက်ခန်းဝယ်မယ် ၊ ကားဝယ်မယ် ၊ မိန်းမယူမယ် စသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်တွေချမှတ်တာ ) Schedule (n) : လုပ်ဆောင်ရန် အစီအစဉ် ၊ အချိန်ဇယား
Agenda (n)(အဂျန်းဒါ) : အစည်းအဝေး အစီအစဉ် ( ဖွင့်လှစ်မယ် ၊ ဖတ်ကြားတင်ပြမယ် ၊ ဆွေးနွေးမယ် ၊ အတည်ပြုမယ် ၊ မှတ်တမ်းတင်မယ် ၊ ပြီးဆုံးကြောင်းကြေငြာမယ် ၊ စသည်ဖြင့် အစီအစဉ်များ ) Schedule (n) :aplan for carrying outaprocess or procedure, giving lists of intended events and times. Agenda (n) :alist of items to be discussed ataformal meeting. ……………….. ဘ၀အတွက် အစီအစဉ် ကောင်းကောင်းလေး ရေးဆွဲနိုင်ကြပါစေ.. . မေတ္တာဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့